A na-anapụta ndị na-atụgharị onwe ha na igwe ojii nke COVID-19-NEWS-Square Technology Group Co., Ltd.
Self-stacking gburugburu friza
Fluidized ndina friza
Akụkụ Nnọchi na Ọrụ
Ahaziri okpomọkụ Exchanger
Igwe nju oyi Single friza friza
Solid gbalaga ọwara friza Ntupu eriri ọwara friza
Ntupu echebe Impingement friza Solid Belt Impingement friza
HPF usoro mmiri horizaontal efere friza GF (J) usoro ọkara kọntaktị efere friza na friji unit GA GF usoro shelf efere friza WF (J) Series efere friza na Refrigeration Unit WA WF usoro kwụ efere friza Air gbawara friza Onye na-eme ihe nkiri YT-4 Aluminom-alloy kefriza tree VPF usoro vetikal efere friza
Kọmpat ikuku oyi Dual eriri igwe ikuku oyi Ilingkwaa igwe mkpuchi ikuku
Ngwakọta condenser na-arụ ọrụ Igwe ikuku nke ikuku V nwere obi jụrụ Ewepụghị ikuku mma condenser
Ebube onwe onye na-ejide onwe ya gburugburu igwe ojii nke COVID-19
on 15th June 2020, ya na ngwongwo ngwongwo ikpeazụ si n'ụlọ nkwakọba ihe ya pụọ, Square Technology gara nke ọma wepụta ụzọ abụọ n'ime ngụkọta 4 na-atụkọta onwe ha na Dachan Food (Taiwan). A na-ahazi friza abụọ fọdụrụ onwe ha ga-ewepụta n'izu abụọ na-abịa. A na-enyefe ndị na-atụgharị onwe ha na nhazi oge na-enweghị mmetụta nke COVID-19, n'ihi ndị ọrụ Square Technology na ndị ọrụ injinia na-agbasi mbọ ike.
The Square Technology si onwe-stacking gburugburu friza na-abụghị nanị ọma-natara site Chinese ahịa, ma na-ewu ewu n'etiti esenidụt ahịa. 2018-2019, etinyere otutu ndị na-atụgharị onwe ha na friji na-arụ ọrụ zuru oke na ụlọ ọrụ nhazi atọ dị iche iche nke CP Foods Group na Thailand, onye bụ nnukwu nhazi anụ ọkụkọ na Asia. Ihe oriri CP nwere afọ ojuju maka ogo akụrụngwa gụnyere ịdị ọcha, ntụkwasị obi, ndozi dị mfe, ọrụ HMI nke ọfụma yana nkwado teknụzụ oge.
Ruo taa, Square Technology ewepụtala ihe karịrị 40 na-etinye ihe na-emegharị onwe ya, nke a na-etinye n'ọtụtụ ebe na ọtụtụ ọrụ, ọkachasị anụ ọkụkọ, anụ, nri dị njikere, wdg.
Ihe ndi ozo banyere otu Dachan:
Mgbe Ho-jan Han guzobere Tai-Dong Mills, obere nhazi nke mmanụ soybean na achịcha, na 1957, ọ malitere ọhụụ nke na-aga n'ihu na-akwọ onye Tai-Dong nke oge a - DaChan Great Wall Group.
Ruo ihe karịrị ọkara narị afọ, DaChan Great Wall Group ejirila eziokwu na ịdị umeala n'obi chụọ ọhụụ ọhụụ ya. Ndị otu a na-arụ ọrụ sistemu kwụ ọtọ na ọkụkọ ,oyi akwa,hog,na aquaculture na-achịkwa n'ụzọ zuru ezu ozuzu, mgbasa, mmepụta nri, igbummadu, na ikpeazụ nhazi. Ndị otu a na - etokwa mmanụ azụmaahịa na ntụ ọka azụmaahịa ha ma na - agbasawanye nwayọ na mpaghara F&B na njikwa ya. Taa, DaChan Great Wall Group na-arụ ọrụ azụmahịa isii, gụnyere Feed & Flour Business Group, Agri-Meat & Egg Business Group, Nhazi Business Business Group, Foodservice Business Group, Southeast Asia Business Group, na East Asia Business Group.
N'ikwekọ na ebumnuche mpaghara mpaghara, DaChan na-elekọta ndị enyemaka 100 gafee nnukwu ahịa ya na Taiwan, China, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar na Cambodia.
Na Mbụ laghachi OSOTE
Adreesị ụlọ ọrụ
Prdoducts Njikọ Ndenye
Ngwakọta condenser na-arụ ọrụ
Igwe ikuku nke ikuku V nwere obi jụrụ
Ewepụghị ikuku mma condenser
Solid gbalaga ọwara friza
Ntupu eriri ọwara friza
Ntupu echebe Impingement friza
Udo na oru oma
Copyright © Square Technology Group Co., Ltd. ICP ： 11073309 号 -1 Iwu ọkwa ọkwa Nka na ụzụ site MEEALL ICP 备 11073309 号 -1